Tartanka ciyaaraha kala du-duwan ee 9ka Gobol iyo 4 ismaamulka magaalo ee DDSI oo galabta si rasmi ah ugu furmay garoonka wayn ee kubada Cagta Magaalada Jigjiga. - Cakaara News
Tartanka ciyaaraha kala du-duwan ee 9ka Gobol iyo 4 ismaamulka magaalo ee DDSI oo galabta si rasmi ah ugu furmay garoonka wayn ee kubada Cagta Magaalada Jigjiga.
Jigjiga(CakaaraSport) Jimce August 30,2013.Xafladdii furitaanka tartanka ciyaaraha kula duwan ee 9ka gobol iyo 4 ismaamul magaalo ayaa xafladdii furitaanka oo si heer sare ah looga sii shaqeeyay islamarkaana lagu qabtay garoon aad u qurux badan oo ah garoon siwayn looga shaqeeyay islamarkaana dhisme aad u heer sareeya laga dhisay iyada oo uu yahay garoonka logu tala galay in lagu qabto maalinta xuska mooyidahaha iyo shucuuta dalka itoobiya mudo koobana lagu dhamays tiray dhismihiisa.
Sidoo kale xafladdii furitaanka ayaa ay ka soo qayb galeen qaarka mid ah masuuliyiinta xukuumadu ugu sar saraysa oo uu ka mid yahay madaxwayne ku xigeenka ahna ku sii simaha madaxwaynaha DDSI mudane c/laahi yuusuf weerar, komoshineerka komishinka ciyaarha DDSI Md maxamed bile xasan (miig) mayorka ismaamulka magaalada jigjiga mudane c/risaaq, qaarka mid ah golaha wasiirada DDSI ciyaartoyda ka kala socoday 9ka gobola iyo 4ta ismaamul magaalo kooxaha fanka iyo suugaanka DDSI iyo waliba dadwayne taagerayaal ah oo aad u tiro banaa oo ay ka muuqatay xamaasad iyo calaamadaha taageerada Gobolkooda ama maamul magaalo.
Haddaba jawigii xafladdii furitaanka tartanka oo ahayd mid aad u qurux badnaynd ayaa ka ka hor intaan la guda galin barnaamija furitaanka waxaa halkaasi dadwaynaha siwayn u sii madadaalinayay kooxaha fanka iyo suugaanta Deegaanka oo halkaasi ka qaadayay heeso iyo dhaantooyin ka turjimayay ahmiyada ay hiwaayadaha ciyaaraha isportigu u leedahay bulshada gaar ahaan Kobcinta maskaxda iyo jidh-dhiska dhalinyarada.
Tartanka ciyaaraha kala duwan ee 9ka gobol iyo 4 ismaamul Magaalo oo halku dheg looga dhigay waxa uu kor u qaadayaa kobcinayaa tayada ciyaaraha kala duwan ee DDSI, wuxuu dhiiri galinayaa in dhalinyaradu ku baraarugaan is dhaxgalka bulshada iyo kor u qaadida tayada Garaadka dhalinyarada hab-dhiska Jidhka dhinaca caafimaadka, tar tanka ciyaaraha kala ee DDSI waa astaamaha horumarka, n/galyada iyo maamulka suuban iyo waliba eraya kale oo soo jeedanaya indhaha ka soo qaybgalayaasha.
Xafladdii furitaanka tartankaa ayaa waxaa ugu horyntii ka hadlay mayorka ismaamulka magaalada jigjiga mudane c/risaaq oo ugu horayntii ku soo dhaweeyay tartamayaasha ka kala ee socday dhamaan gobolada iyo ismaamulada magaalooyinka xarunta caasimada jijiga oo ah meesha martigalinaysa tartanka wuxuuna sheegay in uu tar tankani yahay dadaalada horumarineed ee ay xukuumadu siwayn ugu dadaashay sanaddihii ugu danbeeyay. Sidoo kale waxaa isaguna ka hadlay xafladdii tartankaa komishineerka komishinka ciyaaraha DDSI mudane maxamed bile xasan Miig.
Mudane Miig ayaa siwayn uga waramay ahmiyada uu leeyahay isportigu ayaa waxa uu yidhi” isportigu laha da iyo sinji u gaar ah balse waa aalad ay bulshadu dhameendeed u baahan yihiin in ay sameeyaan laguna ilaaliyo caafimaadka bulshada si loo helo bulsho muruq iyo masgaxba ka caafimaad qabta. Isportigu waxa uu xoojiyaa isku dhawaanshaha, iyo isgaxgalka bulshada” Mudane miig isaga oo hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu sheegay in xukuumada DDSI ahmiyad gaar ah siisay siddii loo horumarin lahaa dhamaan ciyaaraha kala duwan haddii ay tahay ciyaarta kubada cagta ka kolayga kuwa hidaha iyo dhawanka.
waxaa ugu banbayntii shaaciyay in uu tar tankani furan yahay madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna ku sii simaha madaxwaynaha mudane c/laahi yuusuf weerar oo si qoto dheer uga waramay ahmiyada uu isportigu u leeyahay guud ahaanba bulshada, waxaa kale oo uu sheegay ku sii simaha madaxwaynuhu in qorshaha 5 sano (GTP) ee xukuumada u yaala ahmiyad gaar ah uu siinayo dhinaca kor u qaadida ciyaaraha isportiga is loo dhimo saboolnimada iyo shaqa la aanta soo wajihi karta dhalinyarada ayaa waxaa naga go’an haddii aan nahay xukuuamda DDSI in aan siwayn u xoojino dhinaca ispooriga, wuxuuna ugu danbayntii ku sii simaha madaxwaynuhu iswayn ugu booriyay kooxaha kala duwan ee ka soo qaybgalay tartanka iyo dhamaan kulshada daawadayashaaba in ay siwayn u ilaaliyaan anshaxaha iyo akhlaaqda ciyaarta.
Wuxuuna gaar ahaan siwayn ula dar daarmay tartamayaasha ciyaartodya in ayna ka xibin shuruudaha u yaala ciyaaraha, haddaba hartankaasi oo galabta lagu furay ciyaartayda u dar damaysa ismaamulka magaalada qabri dahar leh iyo kooxda u dar damaysa gobolka liibaan ayaa waxaa ugu horayntii furay islamarkaana laagay kubaddii ugu horaysay madaxwayne ku xigeenka ahna ku sii simaha madaxwaynha mudane c/laahi yuusuf weerar,Sidaasi ayayna ku bilaabmatay ciyaartii ugu horayysay ee lagu furay tartankani.
Haddaba ciyaartaasi oo dar-dar xoogleh ku bilaabmatay koox walbana soo bandhigtay awoodeeda ayaa waxaa labaddii qaybood ee ciyaarta laysla mariwaaway 0 iyo 0 Qaabka ay iskugu aadan yihiin ciyaaruhuna waxaan udiin ku soo gudbinaynaa warkayaga xiga